पञ्चायत र बहुदलको संसदिय स्वरुप | Hamro Patro
यस पालाको प्रतिनीधी सभा र प्रदेश सभा चुनावमा भने कुनै एउटा दलले स्पष्ट बहुमत ल्याईदिओस भन्ने चाहना धेरै नेपालीको छ । समिकरण को सरकार र गठबन्धनले बिकासलाई अवरोध पक्कै गरेको छ । भोलीको चुनावको सबैलाई शुभकामना, यि पुराना संसदिय व्यबस्थाहरु बाट आज हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौं । नेपाली प्रजातन्त्र संस्थागत होस्, सबैको जय होस् ।
प्रतिनीधीसभा र प्रदेश सभाको चुनावी लर्कोले छोयो, यो बर्ष बिसं २०७४ साल त चुनावकै बर्ष भएको छ । मतदान केन्द्रमा तारतम्य मिलिसक्यो होला ? मतदान अधिकृत लगायत सबैजना भोलीहुने प्रजातन्त्रको महाकुम्भलाई तयार हुनुहुन्छ नि ? नेपाली प्रजातान्त्रीक अभ्यासमा बास्तवमै उपलब्धी अनि फडकाहरु धेरै छन् । यस आलेखमा भनें हाम्रो पात्रो ले बिगतका दिनमा नेपालमा भएका संसदिय ब्यबस्था अनि चुनावी लर्काहरुका कुरा गर्न जाँदैछौं।
प्रसगं जोडौं बिसं २०१५ को चुनावको ।
राष्ट्रिय जनमत संग्रह बिसं २०३६ मा भएको पाइन्छ ।
धेरै षडयन्त्र अनि पर्दाहरुका बीच भएको जनमत संग्रहका कथा अनि तथ्यहरु आँफैमा आधा अपुरा पनि छन् ।
पञ्चायति व्यबस्थाको संसदिय संरचना
नेपालको अन्तरिम शासन बिधान २००७ मा संसदको रुपमा एक सल्लाहकार सभाको प्रावधान राखेको थियो तर यसका सदस्यहरु राजाले मनोनयन गर्ने चलन थियो । यस सल्लाहकार सभामा तत्कालिन श्री ५ को सरकारका सबै मन्त्रीहरु पदेन सदस्य रहने प्रावधान थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ को भाग ५ मा पनि संसदको गठन समबन्धी व्यबस्था रहेको पाइन्छ । श्री ५ महराजधिराज र महासभा तथा प्रतिनिधिसभा नामका दुई सदन भएको संसदको व्यवस्था गरिएको थियोस्
क। महासभाको गठन महासभामा जम्मा ३६ जना महासभासद रहने व्यवस्था थियो । ती मध्ये १८ जना प्रतिनिधिसभाद्वारा निर्वाचित हुने र १८ जनालाई राजाले संविधानको धारा २१ अनुसार मनोनित गर्ने प्रावधान थियो । महासभाको पदावधि ६ वर्षको थियो र यसलाई प्रतिनिधिसभाको विघटनले कुनै असर गर्दैनथ्यो ।
ख। प्रतिनिधि सभा निर्धारित विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरुद्वारा निर्वाचित सदस्यहरु भएको एक प्रतिनिधिसभाको व्यवस्था संविधानले गरेको थियो । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट गोप्त मतदानद्वारा एक सदस्य निर्वाचित हुने र ऐनले अन्य व्यवस्था नगरेसम्म १०९ निर्वाचन क्षेत्र रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।
बहुदलिय शाषन व्यबस्थाको संसदिय स्वरुप
०४६ सालको जनआन्दोलनपछि जारी भएको २०४७ सालको संविधानमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदन रहने व्यवस्था गरियो । श्री ५ लाई पनि संसदको अङ्गको रुपमा राखियो । प्रतिनिधिसभामा जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएर आउने दुई सय पाँच जना सदस्य रहने व्यवस्था थियो । त्यस्तै राष्ट्रियसभाको कुल संख्या ६० थियो । यस सभामा राजाले मनोनित गर्ने १०, प्रतिनिधीसभाबाट निर्वाचित हुने ३ महिलासहित ३५ र स्थानिय पदाधिकारीबाट निकायका प्रनिनिधीबाट १५ जना निर्वाचित हुने प्रावधान थियो । विधानले यसलाई एउटा स्थायी सदनका रुपमा परिकल्पना गरेकाले यो विघटन हुन नसक्ने व्यवस्था थियो । सदस्यहरुको पदावधि छ वर्षको हुने र प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाई सदस्यको पदावधि समाप्त हुने र पदपूर्ति हुने व्यवस्था थियो । राजा आफैँ संसदमा उपस्थित भएर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने र नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने चलन थियो । संसदले राजालाई धन्यवाद टक्राउनुपर्थ्यो । ०४६ सालपछि ०४८ साल वैशाख २९ गते, २०५१ कात्तिक २९ गते र २०५६ वैशाख २० र जेठ ३ गते गरी तीनवटा संसदीय निर्वाचन भयो । २०५९ कात्तिक २७ गतेदेखि पुस २६ गतेसम्म छ चरणमा संसदीय निर्वाचनको घोषणा भए पनि असोज १८ को शाही घोषणाबाट स्थगित गरियो । तीनवटा संसद निर्वाचित भए पनि कुनै पनि संसदले पाँचवर्षको अवधि पूरा गर्न पाएनन् ।
यस पालाको प्रतिनीधी सभा र प्रदेश सभा चुनावमा भने कुनै एउटा दलले स्पष्ट बहुमत ल्याईदिओस भन्ने चाहना धेरै नेपालीको छ । समिकरण को सरकार र गठबन्धनले बिकासलाई अवरोध पक्कै गरेको छ ।
भोलीको चुनावको सबैलाई शुभकामना, यि पुराना संसदिय व्यबस्थाहरु बाट आज हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौं । नेपाली प्रजातन्त्र संस्थागत होस्, सबैको जय होस् ।